တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: ဘယ်သူ့လက်ထဲမှာလဲ ….
သတင်းစာမှာရေးတာ ဒီနေ့ဒီအခြေအနေဟာ ၈၈အပြီး နာလန်ထခါစ မြန်မာပြည်တဲ့.. ၈၈ အတွက် အရမ်းကြီး ပေးဆပ်ခဲ့ရတယ်တဲ့ (မြန်မာ့အလင်းထဲက ကောက်နှုတ်ပါတယ်)၊ ၃နှစ်သားတွေ ဈေးထွက်ရောင်းရတဲ့ ပေးဆပ်ခြင်းမျိုးထင်ပါ့။ ဒါနဲ့ ဟိုးမင်္ဂလာပွဲလေးကို သတိရမိတယ်ဗျာ... ဘာလို့ပြည်သူတွေပဲ ပေးဆပ်နေရတာပါလိမ့်..
12/18/2006 5:32 AM
အမေးရှိပေမယ့် အဖြေမရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေ အများကြီးပဲနော်။
စကားလုံးအတော်များများကို ရင်ထဲမှာပဲ ပြန်သိမ်းထားလိုက်ရတွေလည်း အများကြီးပဲ။
12/18/2006 5:52 AM
12/18/2006 8:13 AM
တိုင်းပြည် ကြမာဆိုတာ ပြည်သူတွေ လက်ထဲမှာ ရှိပါတယ် မမေဓာ
ပြည်သူတွေ မကြိုးစားရင် ကျနော်တို့ လုပ်သမျှ အချည်းနှီးသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
စကားမစပ် အဲလို ရောင်းတာမျိုး ကျနော်လဲ ဘယ်ကြည့်ချင်ပါ့မလဲဗျာ.. ခက်တာက ကဘာကြီးမှာ ဒီ့ထက် ဆိုးတဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေ ရှိသေးတယ်လို့ တွေးကြည့် မြင်ကြည့်ရင် လူ့လောကကြီးဟာ စုတ်ပြတ်သပ်နေတယ်ဆိုတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
Who know the future of Myanmar even if we don't know about ourselves, May Dar Wii yae???
I have seen quiteanumbers of people doing in the streets of Yangon.
I personally find out the cause, why....
1- there is no much job opportunity
2- even if one gets the job, working from dawn to dusk , can't suvive the family life, each and every one in the family has to do and look for earning of their own, regardless of young or old.That's means the income does not cope toaliving.
On the contarary , some people know that easy money can be got by begging around, those are very lazy peoples and taking advantages to those who has sympathy.
Days after days , years after years, we can see the big gap between the rich and the poors.........more and more children, instead of going to school, some works at tea shops, street stall etc.. in order to provide enough food to their family members.
I am sure there is some young children were surving at the tea shop where you hadacup of tea.
It is notagood thing to us....isn't it?
12/18/2006 2:43 PM
အဲဒီ စပါးတွဲတွေ သူတို့ ဘယ်ကရသလဲ...ကိုယ်တိုင် စိုက်ထားသလား...
ဒါမှ မဟုတ်.......... ......ထမင်းတလုပ်အတွက် ပေးဆပ်လိုက်ရတဲ့ အကျင့်
သိက္ခာတွေ ဘယ်သူသိမလဲ...မလုပ်ချင်ဘဲနဲ့ စတေးလိုက်ရတဲ့ ဘ၀တွေ
ဒါတွေသိရက်နဲ့ဘာမှ မလုပ်နိုင်၊ မလုပ်ရဲတဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဘဲ မကျေမနပ်ဖြစ်မိတယ်။ တိုင်းပြည်အတွက် ရှောင်သီလတွေ ရှောင်နိုင်ခဲ့ ပေမယ့် (လုပ်ဆောင်ရမဲ့ )ဆောင်သီလတွေ ဘာမှ ဟုတ်တိပတ်တိမလုပ်နိုင်ခဲ့ ဘူး။ ကျွန်တော့်လို သာမန်၊ သာမန်ဆိုတဲ့ ပြည်သူတွေ များနေတာ၊ တကယ့်ကို အသက်စွန့် ၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့်လုပ်နေတဲ့ (အထဲက) လူနည်းစုလေးကို သိပ်အားနာတယ်။ အရွယ် မရောက်သေးတဲ့နောက်မျိုးဆက် ကလေးတွေကိုလဲ အားနာတယ်။ စပါးတွဲဗန်းရွက်နေရတဲ့ ကလေးတွေကိုလဲ အားနာတယ်။ တိုင်းပြည်ကို ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထက်၊ ကိုယ့်မိသားစုထက်၊ ပိုမချစ်နိုင်တာ အပြစ်လို့ခံစားရတယ်ဗျာ။ ဒါကို သိလို့ဒီလို လုပ်နေကြတာကိုလဲ ခံပြင်းတယ်ဗျာ။ သတ္တိမရှိ၊ မစွန့် လွှတ်နိုင်တဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဘဲ အပြစ်တင်မိတယ်ဗျာ။
မူရင်း ပို့စ်ရော ရေးထားကြတဲ့ ကွန်မန့်တွေရော သိပ်ကောင်းလွန်းတော့ ကျနော်က ဘာဆွေးနွေးရမယ်မှန်းတောင် မသိတော့ဘူး.. စပါးတွဲတောင် လိုက်ရောင်းနေတယ်ဆိုတော့ တော်တော် ဆိုးဝါးတာပဲ.. ကျနော် မီးရထားနဲ့ ခရီးသွားတဲ့အခါတွေမှာ ရထားကြီးက တဝေါဝေါနဲ့ ဖြတ်သွားတုန်း အပြေးအလွှားနဲ့ လက်ပြ နှုတ်ဆက်တဲ့ ကလေးတွေကို တွေ့ဖူးတယ်.. ခရီးသည် တချို့တလေက ငွေတိုငွေစ၊ ဒါမှမဟုတ် စားစရာ တခုခု ပစ်ချပေးလိုက်ရင် အလုအယက်နဲ့ ကောက်ကြတာ.. ရထားကြီးအောက် ၀င်သွားမှဖြင့်လို့ ရင်တမမနဲ့ စိတ်ထဲ နင့်နေအောင် ခံစားဖူးတယ်.. အခုလဲ စပါးတွဲရောင်းတယ်တဲ့ဗျာ..ါ်(
12/19/2006 2:23 AM
ကွန်မန့်အားလုံးအတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် … ။
အနာဂတ်ကို ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ပါဘူး …
သို့သော် ပစ္စုပ္ပန် ကောင်းမှ အနာဂတ်ကောင်းမယ် ဆိုတာ ငြင်းလို့မရပါ။
ကံနှင့် ကံရဲ့ အကျိုးကို ယုံကြည်သော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်အနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျမတို့ ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေ ပစ္စုပ္ပန်မှာ ပြုနေကြတယ်ဆိုတာ …အနာဂတ်အတွက် မဟုတ်ပါလား။
ကျမတို့ရဲ့ ကံကြမ္မာဟာ ကျမတို့ရဲ့ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရတာဖြစ်သလို …
တိုင်းပြည်ရဲ့ ကံကြမ္မာကိုလည်း ပြည်သူပြည်သားတွေက ဖန်တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်ရဲ့ ကြမ္မာကို ဖန်တီးကြမဲ့ ပြည်သူတွေဟာ
ဒီလိုလူတွေရဲ့ လက်ထဲမှာဆိုရင်တော့ …. ကျမတို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ဟာ လှပပါ့မလား …
စနေပြောတဲ့စကားကိုလဲ စဉ်းစားကြည့်မိပါတယ် …
စပါးစိုက်တဲ့အလုပ်က လယ်သမား အလုပ်ပါ။
လူမမယ် ကလေးငယ်တွေဟာ မိဘအရိပ်အောက်မှာ နေရမှာပါ ..။
ကျောင်းသားဆိုတာ စာသင်ရမယ် …ကျောင်းတက်ရမယ်။
အလုပ်သမားက အလုပ်လုပ်ရမယ် …။
ဒါမှလဲ ဟန်ချက်ညီတဲ့ လောက ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်လား။
ကလေးတွေက စပါးစိုက် …လယ်သမားတွေက စစ်တိုက် ..ကျောင်းသားတွေက ဈေးရောင်း …စစ်သားတွေက တောင်းစား … ဒါဆိုရင် …လောကကြီးက ကမောက်ကမ ဖြစ်ကုန်တော့မှာပေါ့။
ထမင်းတလုပ်အတွက် အကျင့်သိက္ခာပေးဆပ်တယ်ဆိုတာ …
ထမင်းတလုပ်အတွက်နဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ အကျခံတာ … အကျင့်စာရိတ္တတွေ ပျက်ပြားခံတယ်ဆိုတာဟာ စိတ်ဓာတ် မခိုင်မာတဲ့သူတွေ အလုပ်ပါ။
လျှာပေါ်မြက်ပေါက်ပါစေ … ငတ်လို့ သေသွားပါစေ … မဟုတ်တာမလုပ်ဘူး ဆိုတဲ့ ခိုင်မာတဲ့ စိတ်ဓာတ်ရှိသူတွေကျတော့ ကိုယ့်ဝမ်းရေးထက် … ကိုယ့်အသက်ထက် …. ဂုဏ်သိက္ခာ နဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကို စောင့်ထိန်းပါတယ် … တန်ဖိုးလည်း ထားပါတယ်။
စနေပြောသလို …. မလုပ်ချင်ဘဲ စတေးနေရတဲ့ ဘ၀တွေကို မြင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ … သူတို့ ဘာကြောင့် စတေးနေရသလဲ …. ။
တစုံတရာ အကျိုးအမြတ်ကြောင့်လား … ။
အများအတွက်လား … ။
လက်တဆုပ်စာ လူတစုအတွက်လား …. ။
မောင်နှမ နှစ်ယောက် တူတူ စပါးတွဲရောင်းပြီး ၀မ်းစာရှာနေကြရတာပေါ့။ ဒီစာကြောင်းလေးကို အတော် ကြိုက်တယ်။ ယောဂီညိုရောင်တွေက တန်းဖိုးနည်းရင် ပြန်အမ်းတက်တယ်။ အတန်ကြီးပေးရင် သွားဖြီးပြတဲ့ အကျင့်ရှိတယ်။
dee article lay phat pee, that pyinashe gyi cha mi par dal, ta chein the hmar pe, phe phe ne, me me go,ayan kyay zuu tin mi par dal, kya naw to mg nyit ma twe go, khaing ma sar khe buu,aywet ma youk khin, ma may, thanks for article which made me miss my mom and dad....